လျှောက်လွှာစစ်ဆေးရမဲ့စာရင်း - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
အဆိုပါ scan ဖတ်မှတ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးလျင်မြန်စွာသင်လျှောက်လွှာကို process မှခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏မှတ်တမ်းများ၏မူရင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ (အောက်တွင်အမှတ်4ကြည့်ရှုပါ။ )
သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ခံမှုအထုပ် / I-50 အထုပ်သင်တို့ဆီသို့ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်းရှေ့တော်၌ထိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံအဆင့်လက်ခံရေးရုံးခံယူရမယ်တဲ့ $ 20 Non-အမ်းအခကြေးငွေရှိပါသည်။ (မှတ်ချက်: သင်၏လက်ခံအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိသည်တိုင်အောင်ဤငွေပေးချေမှုကိုမပို့ပါ!)
မေးခွန်းလွှာ? အီးမေးလ်ပို့ရန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်လက်ခံရေးန်ထမ်းတဦး။